कुनै पनि तरिका होम लीकमा अझ विस्तृत स्पोयलहरू छैन
कुनै पनि तरिका होम लीकमा अझ विस्तृत स्पोयलरहरू छैनन् - BGR
यो वास्तविक अपराध मा आकर्षक नयाँ वृत्तचित्र हो ...
HBO अन्त मा एक नयाँ शो हुन सक्छ कि ...
अगस्त २०२१ मा नेटफ्लिक्समा नयाँ: सबै कुरा आउँछ र जान्छ
यो जुन 9th औं हो, जसको अर्थ पहिलो एपिसोड हो लोकी अन्तत: डिज्नी + मा स्ट्रिम गर्न उपलब्ध छ, र तपाईंले मौका पाउनु भएपछि यसलाई हेर्नु पर्छ। अत्यधिक प्रत्याशित टिभी कार्यक्रमले हामीले आशा गरेको ठाउँमा उचाल्छ, र यो नै हो " गौरवशाली लक्ष्य " अब देखी। तर यो बाहिर जान्छ कि एक विशाल स्पाइडर म्यान: पथ घर छैन चुहावटले भरखरै वेबमा हिर्काएको हुन सक्छ, स्पोइलर-मायालु मार्वल प्रशंसकहरूलाई सबैभन्दा विस्तृत रूपमा माकुरो मानिस प्लट लीक जुन हामीले अहिले सम्म देख्यौं। सूचना, यदि तपाइँ MCU खराब गर्नेहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तपाईं अहिले पहाडहरूको लागि भाग्नु पर्छ र अर्को भाग्नु पूर्ण रूपमा टाढा रहनु पर्छ। यो हो यदि तपाईंलाई पहिले नै सब भन्दा ठूलो थाहा छ भने पनि कुनै घर छैन रहस्य र मार्वल र सोनीले सिर्जना गरेको फिल्मको प्रकारबाट सचेत छन्।
दिनको सर्वश्रेष्ठ सम्झौता	अमेजनसँग di 60 भन्दा कमको लागि वास्तविक हीरा स्टड इयररिंगहरू छन् - र समीक्षाहरू चार्टहरू बाहिर छन्!	मूल्य:59,90 $
म ब्रान्ड नयाँ चुहावटमा पुग्नु भन्दा पहिले मैले तपाईंलाई त्यो सम्झाउनु पर्छ कुनै घर छैन सम्भवतः एक विशाल मल्टिभर्से कहानी हुन गइरहेको छ, हामीले सोनी उदाहरणमा पछिल्लो पटक देखेका थुप्रै खलनायकहरू मात्र सँगै ल्याएर। माकुरो मानिस प्रोजेक्टहरू, तर अन्य दुई स्पाइडर मेन जुन सोनी चलचित्रहरूले चित्रित गर्‍यो। उल्टो, लोकी सुरु भइसकेको छ मल्टिर्सेर्सको नियमहरू बुझाउनुहोस् र पवित्र टाइमलाइन, त्यसैले टिभी कार्यक्रम तपाईंले अवलोकन गर्नु अघि देख्नै पर्दछ स्पाइडरम्यान3et अनौंठो २.
हामीले पहिले नै केहि देख्यौं स्पाइडरम्यान3अगाडी चुहावट ट्रेस गर्नुहोस्, ती मध्ये एउटा सर्फेसिंगको साथ केही दिन अगाडी। यो क्षणमा प्रमाणित गर्न सकिदैन, तर यो एक अंदरूनी भित्रबाट धेरै चुहावट हो। केही हप्ता पहिले। यो नोट गर्नुपर्दछ कि यस लीकरसँग एक प्रमाणित ट्र्याक रेकर्ड छ - ऊ वा उनी उही हो जसले गोप्यताको पहिचान प्रकट गर्‍यो। फाल्कन र शीतकालीन सैनिक यो प्रकरण डिज्नी + मा प्रसारित हुनुभन्दा पहिले क्यामियो।
नयाँ प्लॉट चुहावट उही छायादार MCU चुहावट स्रोतबाट आउँदछ जुन हामीले माथि उल्लेख गर्यौं, 4chan, जहाँ केहि हुन सक्छ। अघिल्लो लीक जस्तै, केहि पनि पुष्टि गर्न कुनै तरिका छैन, तर यस व्यक्तिले प्रत्यक्ष ज्ञान र पहुँच गर्न दावी गर्दछ कुनै घर छैन पार्सल व्यक्तिले भन्यो कि उनीहरूले करीव hours घण्टा २० मिनेट को कटाई देखे र मूल लिपि पढे:
सबैलाई नमस्कार, मैले यस अघि सोनीको योजनाहरूको बारेमा जानकारी फाँटें र प्लाट तोड्न भनियो। मैले पहिलो भन्दा बढी क्षमतामा मार्वल स्टुडियोमा काम गरें, तर सोनीमा काम गर्न थालेको वर्षौं अघि। मैले नो वे होमको कुनै न कुनै कटौती देखे जुन लगभग hours घण्टा २० मिनेट लामो थियो। त्यहाँ अपूर्ण CGI हरू थिए, र धेरै एनिमेटिक्सले थप फोटोग्राफहरूको लागि राखिएको फुटेजलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो। जे होस्, मैले स्क्रिप्ट पढेको छु र फिल्मांकन पछि धेरै परिवर्तन भएको छ, म यसको जवाफमा प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छु कि यसलाई काटमा नभएको चीजहरूको सन्दर्भको रूपमा।
व्यक्तिले फिल्मको पहिलो दुई कार्यहरू मात्र सूचीबद्ध गर्यो, कसरी एन्ड्र्यू गारफिल्ड र टोबे मग्वाइरको स्पाइडर-मेन संस्करणहरू फिल्ममा देखा पर्दछ भनेर वर्णन गर्दै। चुहावट अघिल्लो जस्तै छ। यसले वर्णन गर्दछ कसरी MCU को पीटर पार्कर (टम हल्यान्ड) पछि हुने स्थितिसँग व्यवहार गर्दछ घरबाट टाढा र कसरी डाक्टर अनौंठो (बेनेडिक्ट कम्बरब्याच) ले पहिले नै मल्टिर्सेर्ससँग मुद्दाहरूको संघर्ष गरिरहेको छ जुन अरू वास्तविकताहरूका खलनायकहरू समावेश गर्दछ। यी खलनायक खलनायक हुन् जो हामीले सोनीको स्टन्ड स्टोनमा पहिले देख्यौं माकुरो मानिस साहसिक कार्य, र MCU को पीटर पार्करले उनीहरूलाई स्ट्र्यान्जेको जेलबाट दुर्घटनामा भाग्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
स्पाइडरम्यान3फोटो: बायाँ देखि दायाँ, टम हल्यान्ड, जेकब बाटलोन र ज़ेंडाया। छवि स्रोत: मार्वल स्टूडियो र सोनी
निम्नमा मैले सम्पूर्ण अनपेक्षित चुहावट सूचीबद्ध गरेको छ जसमा देखाइएको छ 4chan। उत्तममा, यो फ्यान फिक्शन हो जुन राम्रोसँग पढ्छ। दुर्भाग्यवस, त्यसले अन्तिम कार्य समावेश गर्दैन, र लीकरको पोस्ट बन्द भएको थियो यस अघि यसलाई अपडेट गर्ने मौका पाउँदा:
> फिल्म घरबाट टाढाका घटनाहरूको तत्काल परिणामहरूको साथ खुल्छ। Spidey को रूप मा पीटर भाग्दै छ र आफैलाई SWATs र लिबर्टी को मूर्ति मा पुलिस हेलिकप्टरले घेरिएको पाउनु भयो। शहर फर्कनका लागि पत्रुस हेलिकप्टरको प्रयोगबाट भाग्छन् र फेस्ट ट्रकको पछाडिपट्टि लुक्छ, ऊ थकित मास्क हटाएर ऊ बसिरहेको कपडाको थुप्रोमा टक्राउँछ।
> मार्वल स्टूडियो परिचय खेलहरू, जेजेजेको साथ बुगल.नेट नेट न्यूजलेटरबाट काटिएको (होम रिक्यापबाट टाढा, केही नयाँ बेक फुटेज यहाँ 'लीक' को रूपमा, एक शो मा वाकान्डाको उपहारको रूपमा स्ट्याच्यू अफ लिबर्टीमा नयाँ शिल्ड केपको उल्लेख छ। साम विल्सनलाई क्यापको रूपमा समर्थन गर्दै), जुन पीटरको एउटा दृश्य अदालतमा छ। उनी चार्ली कोक्सले खेलेको म्याट मुर्डोकद्वारा बचाइएको छ, जसले पीटर पार्कर स्पाइडर म्यान होइन भनेर जूरीलाई विश्वस्त पार्न खोज्छन्। तिनीहरू स्पाइडर म्यान निर्दोष प्रमाणित गर्न कोशिस गरिरहेको जस्तो देखिदैन, केवल पिटर। अदालत दिनको लागि स्थगित गरियो र म्याट, मे र खुशीसँग पत्रुस बोल्छन्। तिनीहरू बाहिर निस्केर जाँदा, हामी विभिन्न मिस्टेरियो समर्थकहरूले अदालतको बाहिर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरूसँगै देख्छौं जसले पत्रुस सेट अपको शिकार भएको विश्वास गर्छन्। पिटर नेड र एमजेलाई बेकरीमा भेट्छन् जहाँ उनीहरू काम गर्दछन्। उनीहरूले पहिचान खुलासा गर्दछन् र पिटरलाई मिडटाउन हाई न्यूज भिडियो देखाउँदछ जुन यस विषयमा बनेको थियो (फ्ल्याश देखाइएको छ भनेर इन्कार गर्दै "पेनिस पार्कर स्पाइडर-म्यान जत्तिकै शान्त हुन सक्छ" र उनीहरूले यो फिल्म रोक्न भन्नुहोस्)।
> बेकले उनलाई जित्नको लागि चलाउँदैछन् र पत्रुसले भएको सबै कुरा कसरी नष्ट गर्ने बारे पत्रुसको सपना छ। Gyllenhaal यस दृश्य को लागी फर्कियो। पत्रुस उठ्छ र एक रात स्विंग को लागी नेडको घर जान्छ। नेडकी आमाले उनलाई भित्र जान दिए र पत्रुसले नेडसँग उसको मित्रता र एमजेसँगको उनको सम्बन्धलाई कसरी असर गर्दछ भन्ने चिन्ताहरूको बारेमा कुरा गर्दछन्, तर नेडले पत्रुसले उनीहरू दुबैलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिन्छन्।
> भोलिपल्ट, पत्रुस म्याट, हेप्पी र मेको साथ अदालतमा आइपुगे, नेड र एमजेलाई ढोकामा भेट्दै। तिनीहरू अचानक मिस्टेरियो समर्थकहरूको समूहले अभिभूत हुन्छन्। पीटरले सबैलाई बाहिर निकाल्न को लागी उसको शक्तिको प्रयोग नगरी प्रयास गर्दछ, तर नेड, एमजे, हैप्पी, र मे संग सेन्टम स्यान्टोरम नबढुन्जेल संघर्ष गर्दछ।
> अनौंठो उसको सूक्ष्म रूपमा देखा पर्दछ र पत्रुसलाई भन्छ कि उनले मल्टिभर्सल खतराको सामना गरिरहेका छन्, व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको घरेलु संसारबाट हटाइएको छ। उनले भन्छन कि उनले यस संसारको "ठूला खतराहरू" बाट शरण लिन पत्रुस र उनका साथीहरूलाई पवित्र ठाउँमा लगे। जब अनौंठो छोडेर जान्छ, पीटर, नेड र एमजेले अभयारण्यको अन्वेषण गरिरहेका हुन्छन् र एउटा ढोका पछाडि आउँछन् जसले मल्टिर्स्ल शोषणमा पु leads्याउँछ जसमा स्ट्रेन्जले मल्टिभर्से स्टोवेका सुरक्षा गरिरहेका छन् (CGI यहाँ अपूर्ण छ, तर लिपि विवरण "अद्भुत मल्टिभर्सबाट धेरै जीवहरू") देखाइएका मध्ये एक हो), मोटिना सहित अक्ट्यावियस र Foxx लाई इलेक्ट्रोको रूपमा। नेड उनीहरूसँग सages्लग्न हुन्छन्, र उनीहरू उनीहरूको आफ्नो फिल्ममा आफ्नो मृत्युको बारेमा बताउँदछन् र MCU मा नयाँ सुरूवात गर्न चाहन्छन्। यो पीटरसँग गुंज्याउँछ, जसले तिनीहरूलाई छोड्ने निर्णय गर्छ। त्यसपछि उसलाई ओकले आक्रमण गर्छ, जब डा। स्ट्रेन्ज पत्रुसलाई जोगाउने देखिन्छ। इलेक्ट्रो आक्रमण स्ट्रेन्ज जसले ओटो उम्कने क्रममा लगातार बिजुली बोल्छ। इलेक्ट्रोले छततिर बिजुली पुनःनिर्देशित गर्दछ र ओट्टोलाई पछ्याउँदछ किनकि स्ट्रड नेड र एमजेलाई मलबेबाट जोगाउँदछ।
> सियाटोरमको लुगा लगाएको पत्रुसले छोडे र उनलाई पछ्याउन खोजे, जब पौलिया ग्यामाट्टीको गैंडाले सडकमा हमला गरे। उसले उसलाई क्रममा तल लैजाने कोशिस गर्दछ जुन केवल विनाशकारी सवारीको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ र लगभग एक राइनोको दयामा छ जबसम्म एक मैनहोल कभरले उनलाई माथि क्र्याश गर्दैन, उसलाई ढकढकाउँछ। एन्ड्र्यू गारफिल्डको स्पाइडर म्यानले लडाईमा प्रवेश गरे र राइनो र पिटरसँग दुई जनाले साम्राज्य स्ट्राइक ब्याक पद्दतिको सँगै उनलाई तल ल्याउने निर्णय गर्नु अघि ठट्टा गरे।
> कार्य १ को अन्त्य
> MCU पीटर र एन्ड्र्यूको पीटर ब्यान्ड एकसाथ र उनीहरूलाई परिचय दिन्छन्। तिनीहरूसँग द्रुत सम्बन्ध छ र एक अर्काको वेब शुटरहरूको बारेमा पत्ता लगाउन थाल्छन् र अन्ध्रु किन यहाँ छन् भनेर उनीहरूले भ्रम व्यक्त गर्छन् जबसम्म स्ट्रेन्जले उनीहरूलाई सेन्टकममा फिर्ता ल्याउँदैन र राइनोलाई जेल पठाउँदैन। उनले दुई पीटर्सलाई मल्टिभर्सेको व्याख्या गर्छन् र भन्छन् कि उनले एन्ड्रयूबाट पत्रुस ल्याए MCU पीटरलाई भाग्नको लागि भाले खजीहरू भेट्टाउन मद्दत गरे, किनकि अनौंठो उनीहरूको खोजीमा ठूलो खतरामा व्यस्त छ। दृश्य मे, अन्त्यमा नेड र एमजे दुई पत्रुसको माथिपट्टि गएको र उनीहरूको भ्रम व्यक्त गर्दै अन्त हुन्छ। टमको पिटरले उनीहरू कहाँ खोज्नु पर्छ भनेर सोध्छ।
> ओक र इलेक्ट्रो एक परित्यागिएको Oscorp सुविधा प्रवेश देखाइन्छ र Willem Dafoe को नर्मन Osborn द्वारा अभिवादन छन्। ओसबोनले स्पाइडर म्यानलाई "मार्ने" को लागी रिसाउने धेरै मध्ये एक भएको दावी गर्छन्। यसले स्पाइडर म्यान (२००२) बाट उनको मृत्युको इतिहासलाई वर्णन गर्दछ र खलनायकहरूलाई उनीहरूको माकुरोबाट बदला लिने तरीका मात्र प्रदान गर्दैन, तर MCU मा सदाका लागि रहनको लागि अवसर प्रदान गर्दछ। यहाँ यो कुरा पत्ता लाग्यो कि "ओट्टो" वास्तवमा टेन्टप्लेक्स हो जसले ओकको चेतनालाई नियन्त्रणमा राख्छ जब ऊ मृत्युको कगारमा थियो। इलेक्ट्रो र ओक नर्मनको योजना स्वीकार्छन् र उनीसँग सेनामा सामेल हुन्छन्।
> इलेक्ट्रोले कहाँ गए भनेर पत्ता लगाउनको लागि उनीहरूको ब्रह्माण्डहरूको बारेमा स्थिरको बारेमा दुई पिटरको वार्तालाप गरे, र एन्ड्रयूको गोवेन स्टेसी र अंकल बेनको उल्लेख भएको कुराकानी गरे, जबकि पत्रुसले टोनी र उनको बेनको उल्लेख छिटो यस विषयबाट टाढा खोल्ने अघि। जब एन्ड्र्यूले दावी गरे कि उनको संसारमा टोनी स्टार्क छैन र Oscorp उनको संसारको औद्योगिक विशाल हो, MJ ले MCU मा Oscorp को अस्तित्व ल्याउँदछ र पीटर्सलाई एक लेख देखाउँदछ कि Oscorp उद्योगले एवेंजर्स टावर किनेको छ र पहिलो हो आर्क रिएक्टरको शक्तिमा पहुँच प्राप्त गर्न गैर-स्टारक कम्पनी। जब पत्रुसले एन्ड्र्यूलाई चाप र्याक्टर भनेको के हो भनेर बुझाउँदा तिनीहरू दुबैले इलेक्ट्रोले र्याक्टरको पछाडि रहेको र टावरको लागि लाग्ने ठाने।
> तिनीहरू सही छन् जब उनीहरू इलेक्ट्रोलाई भेट्छन् जसले धरहरामा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दछन्। पिटर्स र इलेक्ट्रोको बीचमा संक्षिप्त लडाई सुरु हुन्छ Rhys Ifans 'छेपारोको उपस्थिति द्वारा उनीहरूलाई रोक्न अघि। एमसीयू पिटरले इलेक्ट्रोलाई पछ्यायो, जो रियाक्टर पत्ता लगाउन टावर बिजुली आपूर्तिमा छिरेका छन र एन्ड्रुलाई लिजरार्डसँग पुनः खेल छ। एमसीयू पिटरले इलेक्ट्रोलाई नदीमा पछाडि पार्यो जहाँ आर्क रिएक्टर अवस्थित छ, पीटर हेर्छ जब ऊ आर्क रिएक्टरबाट उर्जा ग्रहण गर्दछ र मेगा चार्ज इलेक्ट्रोले उडायो। ओक आफू र इलेक्ट्रोबाट भाग्नु अघि आफ्नो फराकिलो हतियारको साथ धनु पछाडि खिचेको छ। एन्ड्र्यू लिजरार्डसँग लड्न संघर्ष गरिरहेछन्, जो उनी भन्छन् "पछिल्लो समय भन्दा धेरै शक्तिशाली" छ, जब पत्रुसले लडाईमा सामेल हुन्छन्। अन्तमा, लिजरार्ड भाग्छन् र पिटर्सले ठट्टा गर्छन् कि उनीहरू एक पटकमा यति धेरै सुपर विलेनहरूसँग लड्न अभ्यस्त छैनन्।
> ओकले रिएक्टरलाई फेरि Oscorp सुविधाहरूमा ल्याउँदछ, र इलेक्ट्रोले जेनरेट गर्छ यसको नोटिस गर्दछ। ओसोबोनले इलेक्ट्रोलाई उनीमाथि अधिकार जमाउन भन्छ, जसले वास्तविकतामा छोटो दरार उत्पन्न गर्दछ। छेपारोले फिर्ता गर्छ र ओसबोनलाई सूचित गर्दछ कि पीटरहरू हराए तर मरेनन्। यो सुनेर ओसोबोनले ओकलाई बताउँदछ कि यो व्यापारमा तल झर्ने समय हो र तिनीहरूले नर्मनले बनाएको एउटा उपकरण पूर्ण गर्न सुरु गर्छन् चापको उर्जालाई चक्रहरू बनाउन जुन उनीहरूलाई मल्टिभर्सेको इच्छाले घुम्न दिन्छन्।
> पीटर र एन्ड्र्यू छानामा बसेका छन् उनीहरूको Spidey को रूप मा आफ्नो विफलता को बारेमा। पीटरले फेरीको घटना, टोनीको मृत्यु र खलनायकबाट स्वतन्त्र हुनको लागि मिस्टरियोको विजय र कसरी उसले गल्तीहरू गरिरह्यो भनेर छलफल गर्छ। एन्ड्र्यू कप्तान स्टेसी, कोनर्स, ह्यारी र ग्वेन र कसरी स्पाइडर म्यान हुन एक लागत मा आउँछ बारेमा कुरा, तर तिनीहरूले अझै पनि आफ्नो क्षमता संग सही कुरा गरिरहनु पर्छ। वार्तालापले हल्का मोड लिन्छ किनकि नायकहरूले कसरी उनीहरूका दैनिक शक्तिहरूको लागि प्रयोग गर्छन् (एन्ड्र्यूको पिटरले स्वि sw वेबमा ट्राफिक काम गर्नबाट जोगिनका लागि टिप्पणी गरेका छन्)।
> दुबै भूकम्पले बाधा पुर्‍यायो, किनकि ओसबर्टले मल्टिभर्सल फाफ्ट उपकरणको परीक्षण गर्दछ। उनी थोमा हेडेन चर्चको स्यान्डम्यानलाई फाटको माध्यमबाट पठाउँदछन् र आफू "घर आउँदैछन्" भनेर दावी गर्छन्। Sandman को माध्यम बाट जान्छ, तर अरूले दरारमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले, दुई Spideys तिनीहरूलाई रोक्नको लागि देखाए। इलेक्ट्रोले चापको उर्जा समावेश गर्न संघर्ष गर्दा तिनीहरू ओक र छेपारोसँग लड्छन्। यस राइफ्टहरू अराजक हुन्छन् र लिजरार्डको साथ दुई स्पाइडहरू तान्दछ। स्पाइडहरू सडकमा फ्याँकिन्छन् जबकि छेउ पछाडिको बन्द हुँदा लिजरार्ड अवतरणको रूपमा देखिदैन। ओसबोन, ओक र इलेक्ट्रोले दुबै छेउमा छेउछाउको छेउमा हेर्छन र सुविधा भग्नावशेषमा छ। ओसबोनले टिप्पणी गरे कि उनीहरूलाई अग्लो कन्डक्टर चाहिन्छ किनकि उसको आँखा नयाँ स्टेचु अफ लिबर्टीको पोस्टरमा खिचेको छ।
> दुई पिटरहरू एक अर्कालाई हेर्न सँडमानको आक्रमणको अघि आउँछन्, जो बालुवा हतियारको प्रयोग गरेर यहाँ मानवीय रूपमा छन्। उनीहरु उनीसँग लड्न संघर्ष गर्छन् किनकि उनी पानीको एक ठूलो जेटले ढकढक्याउँदा सम्म प्रत्येक सकेटमा जान सफल हुन्छन्। यो सडक फोहोरमा मर्छ, पिटर्सले हेर्यो कि उनीहरू नजिकैको फायर हाइड्रन्टमा नहेर्ुन्जेल तिनीहरू बलिया बलको साथ Sandman तर्फ झुम्केको देखिन्छन्, तिनीहरू नजिक पुग्छन् र एउटा नोट क्यानभासमा जोडिएको छ। मलाई ठ्याक्कै याद छैन, तर यो फोरेस्ट हिल्समा "घर" लेबलको ठेगानामा थियो।
> सिभिलको कपडामा क्वीन्सको घरमा पिटरको आगमन। उनीहरूले MCU को वैकल्पिक स्थलीय "SHIELD का अभिकर्ता" पिटर सहितको नोट को हुन सक्छ भन्ने सम्भावनाहरूको बारेमा छलफल गर्दछन् जसलाई एन्ड्र्यूले थरथर काँप्ने प्रतिक्रिया दिए। उनीहरूले ढोका ढकढक्यायो जुन कर्स्टन डन्स्टमा खोलिएको मेरी जेन वाटसनको भूमिकामा, जसले उनीहरूलाई भित्र छिर्न निम्त्याउँछ। उनीले उनीहरुलाई बस्ने कोठामा हात हालेकी थिइन् भने रेमिभर्स जे। जोना जेम्सनले टेलिभिजनमा "क्वेस्ट एयरोस्पेस स्टार्क इन्टरनेसनलमा मर्ज भएको" बारेमा प्रस्ताव राखिन्। मेरी जेनले याद गरिन् कि "ऊ एक सेकेन्डमै छोड्नेछ"। एक मान्छे कोठामा हिंड्नुभन्दा अघि पत्रुसले उनीहरूको अगाडि कुर्सीमा बस्यो। टोबी मागुइरे द्वारा पीटर पार्कर। उनले टिप्पणी गरे, "त्यसोभए तिमी को मान्छे हौ? "।
अमेजन खरीददारहरू टीपी-लिंकको कासा स्मार्ट प्लगहरूको साथ ग्रस्त छन् - तिनीहरूलाई प्रत्येक just .6,07.०XNUMX मा पाउनुहोस्!	मूल्यहरूको सूची:26,99 $	मूल्य:24,29 $	तपाईंले बचत गर्नुभयो:2,70 २.10० (१०%)
यो लेख पहिलो (अंग्रेजीमा) https://bgr.com/enteriversity/spider-man-no-way-home-plot-spoilers-detailed-leak-5930785/ मा देखा पर्‍यो
TELES RELAY 55683 पोस्ट 1 टिप्पणी
md5sum - डाउनलोडहरूको अखण्डता जाँच गर्नुहोस् - सुझावहरू
यहाँ छ कि तपाईले आफ्नो कम्प्युटर अमेजन - BGR मा $ 50 को लागी दुई गुणा छिटो बनाउन सक्नुहुन्छ
यो नेटफ्लिक्सबाट वास्तविक अपराधको बारेमा आकर्षक नयाँ वृत्तचित्र हो जुन सबै ...
HBO अन्त मा एक नयाँ शो हुन सक्छ कि संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ ...
सीजन २ का लागि सुपरफान एपिसोडहरू अब मयरोमा स्ट्रिम गर्दै